Sikorsky S-55 လေပွေ FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
Sikorsky S-55 လေပွေ FS2004
အရွယ် 5.22 ကို MB
downloads ရယူရန္5807
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အတွက် FSX သဟဇာတမူကွဲ
ဤတွင် AlphaSim ဒါရိုက်တာအမြင်အာရုံကောင်းသောရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအားသာချက်ယူသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခင်က payware, 2009 ကတည်းကကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်လာသည်!
ပထမဦးစွာရဟတ်ယာဉ်ကုန်တင်စစ်ဆင်ရေး, အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Sikorsky အားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့် S ကို 55 တစ်ဦးက H19, သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ပျံသန်းနိုဝင်ဘာလ 12, 1949 ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 1952 ခုနှစ်တွင်သူသည်လူထုအခြေပြု airworthiness သူ၏လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တောင်ပံ၏ခြေရင်းတွင်တည်ရှိသည်နေစဉ်အလေးချိန်နှင့်အင်ဂျင်အမြောက်အများရဲ့တစ်ခုတည်းသောရဟတ်ရဟတ်ယာဉ်များအပေါ်တစ်ဦးဘန်ကာများတပ်ဆင်တားမြစ်သည်။ အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာကက Igor Sikorsky အင်ဂျင်အထက်ခရီးသည်တင်အခန်းပစ်, ကြမ်းပြင်အောက်မှာလေယာဉ်ပျံများနှင့်တင့်ကားများ၏ရှေ့မှောက်၌အင်ဂျင်အမျိုးမျိုးဖို့စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ဤသို့ဗဟိုပြုတဲ့ဘန်ကာများဆိုက်လွတ်မြောက်စေဖို့။
တစ်ဦးကြမ်းတမ်းသုံး-bladed တစ်ဦးနှစ်ဦး-Blade အမြီးရဟတ်နှင့်တစ်ဦးရထား quadricycle နှင့်အတူရဟတ်ခတ်နဲ့ဆွဲတင်ခဲ့သည်အဖြစ် S ကို 55 ဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ကတုတ်ကျင်း6၏ထမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းဒဏ်ရာ၏ကုသမှုများအတွက် mounting ခရီးသည်သို့မဟုတ်ခြောက်ခုအမှိုက်သရိုက်များ 8 ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပိုပြီးအင်အားကြီးတဲ့ S 50, S ကို 58 အားဖြင့်နှောင်းပိုင်း 55s အတွက်လှညျ့ စား. နိုငျပါ၎င်း၏အများအပြားဗားရှင်းအတွက်, 1280 မိတ္တူမှတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူ၏လိုင်စင်ပြင်သစ်, ဂျပန်နှင့်ဂရိတ်ဗြိတိန်ကဝယ်ယူခဲ့သည်။ Westland ပြင်သစ် 42 မှကယ်နှုတ်တော်မူဗြိတိသျှကုမ္ပဏီသောကျောင်းနှင့် GH55 (အယ်လ်ဂျီးရီးယား) တွင်လိမ့်မည်2ဖွစျသညျ။ (Source: www.museehelico-alat.com)
Sikorsky CH-124 ပင်လယ်ဘုရင်, HAR3A FS2004
Sikorsky S-70A Pack ကို V1 FS2004
Sikorsky S-70 FireHawk နာရီ-60F FS2004